DEG DEG:- Baarlamaanka Puntland oo xasaanada ka qaaday 8 Xildhibaan - Awdinle Online
DEG DEG:- Baarlamaanka Puntland oo xasaanada ka qaaday 8 Xildhibaan
Xildhibaannada Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa Maanta kulan aan caadi aheyn waxaa ay ku yeesheen Xaruntooda ee Magaalada Garoowe, waxaana la sheegay in xasaanada kala laabteen 8 Xildhibaan.
Kulanka Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa horyimid Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland, isaga oo xildhibaannada ka hor akhriyay eedeymo ka dhan ah 8 Xildhibaano, kuwaas oo ay kamid yihiin falal lid ku ah anshaxa iyo xeerarka gollaha ,sida in ay iska hor keeneen gollaha dhexdiisa,maleegitaanka siyaasado gurracan oo ay soo maleegayeen gacmo shisheeye oo ka baxsanPuntland iyo Eedeymo kale.
Intaas kadib Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland ayaa cod u qaaday xasaanad kala noqoshada Xildhibaannada, waxaana la sheegay in 35 Mudane ay gacanta u taageen in xilka laga xayuubiyo oo kalsoonida lagala noqdo,saddex Mudane ay diideen halka hal Xildhibaana uu ka aamusay shaqo ka ceyrinta Xildhibaanadaas.
Xildhibaannada xasaanada lagala noqday ayaa waxaa ay kala Magacyadooda
Xildhinaan Cabdijamal Cismaan
Ka hor kulanka Baarlamaanka ee xil ka xayuubinta xildhibaannada waxaa la sheegay in uu fashilmay dadaalo xal raadin ah oo ay wadeen guddiyo ka tirsan isla gudaha baarlamanka kuwaas oo xal u waayay eedeymaha loo haystay.
Previous articleSoomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Dalka Mozambique
Next articleMidowga Musharixiinta & Beesha Caalamka oo ka wada hadlay diidmada Guddiyada doorashooyinka